Yintoni imodeli 130 | Ezezimali
Encarni Arcoya | 10/06/2021 08:04 | Uqoqosho ngokubanzi
Umthombo Yintoni imodeli 130: Famisenper
Xa usenza umsebenzi wezoqoqosho, enye yeenkqubo ekufuneka uzenzile kukuhlawula izavenge ngenxa yerhafu yengeniso yakho. Oku kwenziwa ngemodeli 130. Kodwa, Yintoni imodeli 130?
Ukuba ubhalisile kutshanje, okanye ukuba ufuna ukwazi ukuba yeyiphi ifom eyi-130 kwaye uyigcwalisa njani ngokufanelekileyo, siza kukuxelela yonke into ekufuneka uyazi malunga nale nkqubo kwaye, ngaphezulu kwako konke, indlela yokuthobela uNondyebo ukuze kungabikho sohlwayo.
1 Yintoni iModeli 130
2 Ungayigcwalisa njani
2.1 Inyathelo nenyathelo kwimodeli
Umthombo: iarhente yerhafu
Imodeli eyi-130 ibandakanya yintoni "Ingxelo yekota yengeniso yomntu". Yintlawulo eyenziwa ngezavenge (ihlawulwa qho kwiinyanga ezintathu) ukuba yeyiphi na intlawulo ekufuneka yenziwe kwirhafu yengeniso yomntu ihlawulwa kwi-Ofisi kaNondyebo.
Kanjalo, ayingabo bonke abantu abanyanzelekileyo ukuba benze njalo, kuphela ezo zibandakanyiweyo kwezi meko zilandelayo:
Ukuba benza imisebenzi yezoqoqosho, kubandakanya leyo yezolimo, imfuyo, amahlathi okanye ukuloba. Ewe kunjalo, kufuneka baseke indlela yoqikelelo ethe ngqo, nokuba yeyesiqhelo okanye yenziwe lula.
Ukuba benza imisebenzi yobungcali. Ngaphandle kokuba i-70% yengeniso yakho sele ibanjiwe okanye idiphozithi kwiakhawunti. Ukuba kunjalo, awunyanzelekanga ukuba ugcwalise iFom 130.
Ukuba intsebenziswano yoluntu kunye / okanye uluntu lwepropathi. Kule meko, iqabane ngalinye kufuneka lenze intlawulo ngokusekwe ekuthatheni kwabo inxaxheba.
Ngoku ngoku icacile kuwe ukuba yeyiphi le fomu 130, lixesha lokuba wazi ukuba uyigcwalisa njani ukuze ilungele uNondyebo kwaye ingatsali mdla wakho; okanye okubi nangakumbi, bakunyanzelisa.
Kuya kufuneka ukhumbule ukuba, KwiCandelo lokuDala, kufuneka ugcwalise zombini i-NIF kunye negama nefani. Ke, kwindawo yokongezeleka, kubalulekile ukuba uchaze ukuba ngowuphi unyaka-mali ekubhekiselelwe kuwo kwaye leliphi ixesha lekota.
Xa ubhengeza ukubuya komnatha, kuya kufuneka ukhumbule ukuba iyaqokelela. Oko kukuthi, khawufane ucinge ukuba kwikota yokuqala ufumene i-euro ezingama-100 zenzuzo. Kwikota yesibini unee-euro ezingama-200. Nangona kunjalo, xa ugcwalisa ifom eyi-130, kuya kufuneka wongeze umvuzo owuchazileyo kwikota yokuqala kunye nowesibini. Ngamanye amagama, kule kota yokugqibela ngekhe ibengama-200 euros yenzuzo, kodwa ngama-300 euros (200 + 100 kwikota yokuqala).
Kwenzeka into efanayo nakwinkcitho kamva, kuya kufuneka udibanise zonke iikota, wandise iindleko obukade unazo kuleyo iqhubekayo.
Ngokubanzi, Umzekelo 130 unamacandelo amathathu ahlukeneyo.
Icandelo I Apho kubekwa khona umvuzo kunye nenkcitho kwaye kufunyanwa ukuba ingakanani i-20% yokuthabatha inkcitho kwimali engenayo Emva koko, ukubanjwa okusenokuba ubukhe wanako kunye nezinto ozihlawuleyo kwikota yangaphambili ziyasetyenziswa kwaye uya kufumana iziphumo.
ICandelo II, kugxilwe kwabo baqhuba ezolimo, amahlathi, ukuloba okanye imisebenzi yemfuyo, abaya kuthi bagcwalise imodeli kule nxalenye.
Y icandelo III, esisishwankathelo sazo zonke ezi zinto zingasentla apho sinika inani lokugqibela, elinokuba kukuhlawula okanye ukubuyekeza.
Inyathelo nenyathelo kwimodeli
Umthombo: Uncedo lweRhafu
Ukwenza icace gca, gcina oku kulandelayo engqondweni:
Ibhokisi 1: kulapho kufuneka ubeke ingeniso yonyaka.
Ibhokisi 2: faka iindleko zonyaka.
Ibhokisi yesi-3: oku kuyazenzekela, into eyenzayo kukuthabatha umvuzo kunye nenkcitho.
Ibhokisi yesi-4: iya kukucela ukuba ubale ngokuthe ngqo ukuba zingaphi i-20% yeziphumo zebhokisi yesi-3, ngokuxhomekeke ekubeni esi siphumo sihle. Yintoni engalunganga? Beka iqanda.
Ibhokisi yesi-5: kwesi sithuba uya kuba nesishwankathelo seebhokisi ezimbini, u-7 no-16. Ezi ziimodeli ze-130 oye wazibonisa ngaphambili. Ukuba, umzekelo, ngowokuqala enyakeni, awuzukubeka nto apha. Kodwa ewe kwikota yesibini yesibini. Kungenxa yoko le nto kubalulekile ukuba ube nala maxwebhu angasentla.
Kwibhokisi yesi-6: uyakuba nesixa sokubamba oye wasifaka okanye osisebenzise kuwe.
Ibhokisi yesi-7: lelinye ukuthabatha, kwibhokisi yesi-5 neye-6 kwibhokisi yesi-4. Into ekufuneka uyihlawule (ibhokisi yesi-4) iyakutsalwa kwizibambiso (5 no-6) esele kucingelwa ukuba zingenisiwe ngegama lakho.
Ukuza kuthi ga apha iya kuba yeyabantu abaziqeshileyo okanye abantu abanemisebenzi yezoqoqosho. Ngoku, ukuba usebenza kwezolimo, imfuyo, ukuloba okanye amahlathi, kuya kufuneka ugcwalise oku kulandelayo:
Ibhokisi 8: kufuneka ungenise umvuzo unyaka wonke, kubandakanya izibonelelo, uncedo ...
Ibhokisi 9: 2% yesixa sebhokisi yangaphambili iya kusetyenziswa ngaphandle kokuthathela ingqalelo inkcitho.
Ibhokisi ye-10: usetyenziselwa ukubeka ukubanjwa ekuye kwafuneka ukuba ufake isicelo kwii-invoyisi ozenzileyo.
Ibhokisi ye-11: Yiyo eya kuthi ikhuphe iibhokisi ze-9 ne-10, inike iziphumo ezinokuba zi-negative okanye zi-positive.
Ekugqibeleni, Icandelo lesithathu sisishwankathelo, kwaye iibhokisi ezihambelana nazo zezi:
Ibhokisi ye-12: apho ubeka khona isibalo seebhokisi ze-7 kunye ne-11.
Ibhokisi 13: into engaziwayo ngabantu abaninzi kukuba, xa umvuzo wakho uphantsi, uNondyebo ukuvumela ukuba unciphise ukuya kuthi ga kwi-euro ezingama-100. Eyona nto intle kukuba ujonge ulwazi malunga naloo bhokisi ikhethekileyo ukuze wazi ixabiso onokufaka ngalo kwisaphulelo (ukuba unako).
Kwibhokisi ye-14: kuya kubakho umahluko phakathi kwebhokisi ye-12 neye-13.
Ibhokisi 15: isetyenziselwa ukurekhoda amaxabiso amabi. Oko kukuthi, ukuba uneziphumo ezibi kwibhokisi ye-19, kuya kufuneka ubonise, ukongeza, kuya kufuneka uthathele ingqalelo ukuba ixabiso lale bhokisi alinakuba ngaphezulu kune-14.
Ibhokisi ye-16: ukuba ibhokisi ye-14 iye yathembisa kwaye uhlawula imali mboleko ngokuthenga okanye ukulungisa ikhaya lakho, ungazitsala ezo ndleko apha. Ungacutha malini? Ewe, isixa esikwibhokisi 3 (okanye 8 ukuba unezolimo, imisebenzi yemfuyo ...). Ukuba, umda ubekiwe kwi-660,14 euro.
Ibhokisi 17: kulula, isiphumo sokuthabatha iibhokisi ze-14 kunye ne-15.
Ibhokisi ye-18: Kuya kufuneka uyigcwalise kuphela xa kukho isibhengezo esongezelelweyo. Ngaphandle koko, ihlala inguziro okanye ingenanto.
Ibhokisi ye-19: ekugqibeleni, le bhokisi ikhupha i-17 kunye ne-18, inika isiphumo esingumzekelo we-130. Ukuba kulungile, kuya kufuneka uhlawule; kwaye ukuba ayilunganga, ungabuyekeza ngezi modeli zilandelayo zonyaka (unokubabuyisela oko uhlawule ngaphezulu).
Ngale ndlela, unokufumana isikhokelo kwaye uqonde ngcono ukuba yeyiphi imodeli eyi-130 kwaye uyigcwalisa ngokufanelekileyo ukuze yonke into ichaneke.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Uqoqosho ngokubanzi » Yintoni iModeli 130
Ukukhula koqoqosho: yintoni, kubangela, kulinganiswa njani